ओलीको राष्ट्रभक्तिलाई कालापत्थरमा पुगेर बदला लिए भारतीय पत्रकारले, यसरी दाबी गरे सगरमाथा | Online Nepal
ओलीको राष्ट्रभक्तिलाई कालापत्थरमा पुगेर बदला लिए भारतीय पत्रकारले, यसरी दाबी गरे सगरमाथा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय पत्रकार सुधिर चौधरीलाई बालुवाटारमा बोलाएर सोमबार अन्तर्वाता दिएपछि उनको राष्ट्रभक्तीको बारेमा सामाजिक सन्जालदेखी सबैतिर हाइहाइ भयो ।
नेपाल र नेपालीलाई सधैं होच्याउने भारतीय पत्रकार सुधिर चौधरीलाई ओलीले पाठ सिकाएको भन्दै हाइहाइ भएको थियो।
ओलीले भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजका प्रधान सम्पादक चौधरीको टोलीलाई बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए ।
तर, हिजो मात्र जी चौधरीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा भारतको पनि हुनुपर्ने दाबी गरेर समाचार प्रशारण गरेर नेपाललाई ठाडो चुनौती दिएका छन्।
चौधरीले सगरमाथालाई भारतीय नाम दिने अभियान नै थालेका छन् ।
जी न्यूजको टोलीले सगरमाथा दाबी प्रस्तुत गर्न सगरमाथा क्षेत्रमै पुग्यो । सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरमा उभिएर, सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधिर चौधरीले भने, ‘आज यो ठाउँबाट तपाईंहरूलाई म केही बताउन चाहन्छु । म भन्न चाहन्छु कि माउन्ट एभरेस्टमाथि भारतको पनि दाबी हुनुपर्छ ।’
उनले भारतसँग सगरमाथाको साइने भएको पनि दाबी गरे । भारतसँग माउन्ट एभरेस्टको के साइनो छ ? वर्ष १८५२ मा राधानाथ सिकदरले पहिलोपटक माउन्ट एभरेस्टको उचाइ मापन गरेका थिए । सर्भे अफ इन्डियाले उनलाई यो जिम्मेवारी दिएको थियो । उनलाई आदेश थियो– तपाईं जानुहोस् र माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापेर आउनुहोस् । ’भन्दै उनले माउन्ट एभरेस्ट भारतले दाबी गर्नुपर्ने कुतर्क पेश गरे।
चौधरीले थप कुतर्क दिँदै भने , ‘राधानाथ सिकदर बंगालका प्रख्यात गणितज्ञ थिए । उनले माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापे । माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नाप्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति थिए । भारतमा त्यसवेला अंग्रेजको शासन थियो, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो हिसाबले नाम राखिदिए । एन्ड्रयु वा जो जर्ज एभरेस्टका उत्तराधिकारीको रूपमा सर्भे अफ इन्डियाको प्रमुख थिए । उनले यो शिखरको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखिदिए ।
चौधरीले आफ्नो यो यात्राले माउन्ट एभरेष्टको सही अर्थ र महत्व बुझाउने कुरामा आफू आशावादी भएको दाबी गरे । भारतीत गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख प्रमुख सामन्त गोयललाई नेपाल ल्याएको टोलीले नै चौधरीलाई बालुवाटार पुर्याइ प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्तरवार्ता मिलाईदिएको स्रोतको भनाइ छ ।
विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ ०.८६ मिटर बढ्यो
नेपालले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई मंगलबार घोषणा गर्ने
सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई अनुमति
केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने प्रचण्ड–नेपाल समूहको निर्णय
नेकपा विवाद टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगमा छलफल, आजै रातिसम्म टुंगो लाग्ने
रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न – अदालतमै सेटिङ गरेर राष्ट्रघात गर्ने प्रधानमन्त्रीले कस्तो चुनाव गराउँछ?
देशद्रोही तत्वलाई चुनावबाट ठेगाना लगाइन्छ : केपी ओली
बाबुरामले भने-चुनावले झन् ठूलो दुर्घटना ल्याउनेछ